न्यूयोर्क, ७ जुन । अमेरिकामा एक नेपालकी एक युवती नेपाली ईतिहासमै पहिलो अमेरिकन सैनिक संगठनको उच्च ओहदाको पद सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट पदमा नियुक्त भएकी छिन् ।
गण्डकी अञ्चलको स्याङ्जा जिल्ला फेदीखोला ४ टोर्केकी अस्मिता गुरुङले सो पदमा नियुक्त भएकी हुन् । अस्मिताको बाजे स्व. मनबहादुर गुरुङ, बज्यै रामकुमारी गुरुङ, बुबा आइबहादुर गुरुङ, आमा मनशोभा गुरुङ हुन् । बुबा आइबहादुर अवकासप्राप्त भारतीय सेना हुन् ।
वि.सं. २०४६ साल मंसिर २९ गते स्याङ्जामै जन्मिएकी उनले बाल्यकालमा आफ्नै गाउँबाट प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गरेकी हुन् । पोखराको न्यू मिलिनियम बोर्डिङ स्कुलबाट एसएसली गरी, सगरमाथा हाइयर सेकेण्डरी स्कुलबाट +२ गरी अमेरिका गएकी थिइन् ।
अस्मिता अध्ययनको शिलशिलामा अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा ब्याचलर अफ साइन्स (नर्सिङ)मा स्नातक गरेकी छिन् । उनले विश्वकै वृहत सैनिक संगठनको लेफ्टिनेन्टमा ९ मे २०१९ मा सपथ लिएकी हुन् ।
अस्मिताले भविष्यमा सक्रिय ड्युटी नर्स कर्पोरेशनमा रहने प्रतिवद्धता जाहेर गरेकी छिन् ।
शनिबार, जेष्ठ २५, २०७६ मा प्रकाशित खबर
राजधानीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु…